ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » တစ်ဦးကပထမဦးစွာနေ့စွဲသည်ဒိုင်ယာလော့
အားဖြင့် Jerusha Stewart က
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဖေဖော်ဝါရီ. 14 2020 |4မိဖတ်ပြီးသား
ကျနော်တို့ကခမ်းနားကြီးကျယ်သည့်ဖက်ရှင်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွေအားလုံးကိုသားကောင်များင်: အရွယ်ရောက်အမျိုးသမီးသူတို့ဝတ်ဆင်အားအဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးသဲလွန်စရတယ်ကြပြီမဟုတ်ယုံကြည်ရန်ဖန်ဆင်းလျက်ရှိ! အဘယ်မျှတခြားအသင်ကြောင်းတရားဝင်ကြေညာခြင်းနှင့်စတိုင်ဆုံးမစကားများရုပ်မြင်သံကြားပြပွဲ၏ပြန့်ပွားခြင်းနှင့်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုကိုရှင်းပြနိုင်? ကျနော်တို့ shrieking ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်ထံမှထွက် သွား. ပျောက်င်, '' ခင်ဗျားအတွင်းအိမ်တော်ကိုစွန့်ခွာမယ့်!’ သတိမရှိသောအမျိုးသမီး cable ကိုစတိုင်ပြပွဲအားဖြင့် punk'd ဖက်ရှင် '' ဖြစ်ခြင်းမှ. ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို unsolicited, သေး 24/7 အကြံဥာဏ်ကျွန်တော်တို့ကိုဒုတိယ-ခန့်မှန်းပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီရိုနှင့်ရှိသမျှသော-အရေးကြီးသောပွဲစဉ်များအတွက်ဝတ်ဆင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ရှိပါတယ်: The First နေ့စွဲ. ဒါပေမဲ့သင်ကယ့်ကိုကောင်လေးကနောက်လာမည့်တံခါးကိုကျော့ကွင်းကိုထောင်ဖို့ပြီးပြည့်စုံသောအဝတ်အစားလိုအပ်သလဲ?
ကျွန်မအဝတ်ကိုထိုမိန်းမကိုအစေခြင်းသို့မဟုတ်လူကို Manolo Blahniks အတွက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဘို့အဒေါက်ကျော်ဦးခေါင်းလဲမဖြစ်စေဘူးယုံကြည်တယ်ပေါ့. ငါသူကငါသည်ကိုပထမဦးစွာ Calvin Klein နွေရာသီ်စားဆင်ယင်တွင်သူမကိုမြင်သောအခါကျွန်တော်သူမကိုနဲ့မေတ္တာသွားခဲ့တာပါ '' ဟုပြောသည်နားထောင်ခြင်းငှါအသေးင့် . . . သင့်အနေဖြင့်တဦးတည်းကိုသတိရ, ပျားရည်, နောက်ကျောဆင်းခလုတ်။’ ပိုပြီးဖြစ်နိုင်ခြေသူသည်မိမိအဟောင်းများကို့ button-ဆင်းရှပ်အင်္ကျီတဦး၌သင်တို့ကိုမြင်လျှင်အားဖြင့်လှည့်ခံရသတိရတဲ့အကြောင်း.
ဆဲ, ကျွန်မစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာပထမဦးဆုံး-date ဖြစ်အောင်အတွေ့အကြုံရှိသည်နှင့်ငါ '' ပြည့်စုံသောရှာနေငါ့အခန်းထဲမှာမှတဆင့် panicked pawings ငါ၏ဝေစုခဲ့တယ်’ ထွက်ကြောင်းကနဦးညဦးယံ၌အဘို့အ ensemble. ငါသည်လည်း, သူတို့ကနဦး hookups အပေါ်စုံတွဲများစောင့်ကြည့်လေ့လာနှစ်ကြာအောင်င်, ငါ့အဖက်ရှင်အတိတ်နဲ့ပေါင်းစပ်, ကျနော်ပထမဦးဆုံး-date ဖြစ်အောင်တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအောင်မြင်ဖို့အတွက်တချို့ဘုံသဘောမျိုးစည်းမျဉ်းများနှင့်အတူတက်ကြပြီ.
1. အနက်ရောင်မဝတ်ပါနဲ့. ဒါဟာနေပြီဖြစ်ကြောင်းကလပ်အတွက်လုံလောက်သောအမှောင်င်, စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်သို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်ရုံသင်၌ဖြစ်နိုင်တက်လေပါလိမ့်မယ်. သင့်ရဲ့မစ်ရှင်ထွက်ရပ်တည်ရန်ဖြစ်သည်, သင့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူရောနှောနေခြင်းမဟုတ်. အပြင်, တစ်ခုတည်းယောက်ျားတွေငါ့ထားသော unofficial စစ်တမ်းကသူတို့အရောင်ကိုလုံးဝကိုအပူတပြင်းနဲ့ပျင်းစရာကောင်းနေရှာတွေ့ကြောင်းတွေ့ရှိ.
2. သင့်ရဲ့ဗီဒိုကိုမဝတ်ပါနဲ့. ဒါဟာသင့်ကုန်တိုက်ကနေခုခံတွန်းလှန်နှင့်ကြိုးများနှင့်ပုလဲကြိုးနှင့်သူတို့ကိုမဖုံးနိုင်င့်တယ်သောဆွယ်တာအင်္ကျီအောက်ကိုသင့်အကြိုက်ဆုံးရှပ်အင်္ကျီ layer ဖို့အချိန်မပေးဖြစ်. ထိုမျှလောက်မျက်စိသကြားလုံးနှင့်အတူ, သင့်ရဲ့ကောင်လေးဒုက္ခဘယ်မှာအာရုံစိုက်ဖို့ထွက် figuring ခဲ့ကြပေမည်. သင်ကကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးယှဉ်ပြိုင်အနိုင်ရကြိုးစားနေပါတယ်, မ '' Project မှလေယာဉ်ပြေးလမ်း။’
3. သင်နှင့်ပတ်ရစ်ပြီးလျှင်ခဲ့တာကဲ့သို့သင်တို့ကြည့်ရှုစေသည်တစုံတခုကိုမျှော်လင့်မပြပါနဲ့, လိမ်သို့မဟုတ်ခုတ်မောင်းတက်ချည်ထား. ဒီသာသူ၏အပိုင်းမှအပေါ်စဉ်းစားမမှားလမ်းမှဦးဆောင်, ကဲ့သို့, '' သူဘယ်လိုကြောင့် get-up သို့ရခဲ့ . . . နှင့်အဘယ်သို့ငါထွက်သူမ၏ရရန်စိတ်ထင်ပါ၏?’ အပြင်, တဦးတည်း၏ကိုယ်ပိုင်အချုပ်အနှောင်စိတ်ကူးယဉ်၏သဲလွန်စကိုထုတ်ပစ်ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအပေါ်လမ်းသတင်းအချက်အလက်တွေကိုအလွန်ပြဌာန်း.
4. ခါးထက်ကြီးမြင့်ရှာဖွေနေအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှု. အခွင့်အလမ်းတွေကိုများမှာ, သင်ထိုင်လိမ့်မည်ညဦးယံ၏အများဆုံး. သူမြင်နိုင်တဲ့တော်တော်ရုပ်ပုံလွှာတင်ဆက်ထားပါတယ်သင့်အရင်းအမြစ်များကိုဖြုန်း. ကိုယ်တော်နှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်တစ်ခုခုပေးပါ: အလွန်ကြီးစွာသောအရောင်အတွက်အင်္ကျီ, သင့်ရဲ့ပခုံးကိုချွတ်ပြသတဲ့ကောင်းစွာလုပ်ထိပ်တန်း, အလင်းကိုအမီလိုက်ကြောင်းသို့မဟုတ်ရတနာပုတီး. သူဟာသေချာပေါက်ဖက်ရှင်မသိစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်လူအများစုကသူတို့အရောင်များနှင့်ပုံစံမျိုးစုံဘာကြိုက်တယ်ဆိုတာသိ: သင်တို့အပေါ်မှာကအရောင်, သင့်ရဲ့ခါးဆစ်ပေါ်တွင်ရှပ်အင်္ကျီ၏ပုံစံ.
5. အရောင်ကိုခင်တွယ်ပါ. သင်က Technicolor splash အတွက်ဝတ်စားဆင်ယင်ရန်မလိုပါ, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့မျက်နှာလှည့်ပတ်အနည်းငယ်အရောင်သင်၏မျက်စိနှင့်သင်၏အပြုံးထွက်ဆောင်ခဲ့ဦးမည်. ညာဘက်အရိပ်ကိုသင်အစားအစာသို့မဟုတ်သူကပြောပါတယ်တစ်ခုခုမှနေမကောင်းခံစားရတဲ့အခါသင် rosy ကြည့်ရှုဖြစ်စေမည်. အမျိုးသားများအနီကိုချစ် – မီးအင်ဂျင်စက်မှချယ်ရီခရမ်းချဉ်သီးမှကြွယ်ဝသောအနီရောင် raspberry မှ. သင်သည်သင်၏အသားအရေများအတွက်သင့်လျော်သောအရိပ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါကကာမဂုဏ်နှင့်ရှုပ်ထွေးမှုများဝယ်လိုအား. လက်မှတ်အရိပ်ချမှတ်. အနီးကပ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတက်ချမ်းသာကြွယ်ဝသောအရောင်အသွေးကိုသုံးပါ.
6. ကျန်းမြှောက်. အရွယ်အစားလောက်မပူပါနဲ့. မထိုက်မတန်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှု. ထိုအဝတ်အစားသည်သင်တို့အပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အခါသင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်အရွယ်အစားသင် fit နှင့်မသင့်. အစစ်အမှန်ဖြစ်: ငါတို့ရှိသမျှသည်ကျွန်တော်သယ်ချင်ကြပါဘူးအိတ်နှင့်ကျွန်တော်လှိမ့်လှန်လိုဆန္ဒရှိလိပ်ရှိသည်. အရေးကြီးသောအရာမထင်မှတ်ဘဲ၏အနုပညာကျွမ်းကျင်နှင့်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်ရန်ဖြစ်သည်. ကြောင်း်စားဆင်ယင်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာလဲလျောင်းသည့်အခါ, သူသည်၎င်း tag ဖြင့်ပေါ်တွင်အရွယ်အစားမှာရှာရလိမ့်မည်မဟုတ်သင်အာမခံချက်.
7. နောက်ဆုံးအနေနဲ့, တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲကြီးတွေထုတ်ဖေါ်ကဲ့သို့တူညီသောမဟုတ်ပါဘူး. သင့်အတွက်အကောင်းဆုံး features တွေ Flaunt, သို့သော်အားလုံးမဟုတ်သူတို့ကို၏တပြိုင်နက်. တစ်ဇောက်ချပါဝင်လာ neckline တစ်ပေါင်ကိုမြင့်မားသောအင်္ကျီများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး. လျော့နည်းပိုပါတယ်. နည်းလေအခုသင်ပြသ, သာ. သင်နောင်တစ်ချိန်အတွက်ရှိသည်လိမ့်မယ်.
ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေအမျိုးသမီးသူမ၏အနှစ်သက်ဆုံးမတ်မတ်အတွက်သူကိုယ်တိုင်၏ Polaroid ဓါတ်ပုံတွေကိုစောင့်ရှောက်. သူမသည်သူမအလွယ်တကူမှတ်မိနိုင်ထက်ပိုမိုအဝတ်ကိုရရှိဖို့ဝန်ခံတယ်, ဒါကြောင့်သူမရဲ့ဖက်ရှင်စာရင်း၏စံချိန်တင်လိုက်နာနှင့်သူမ၏အပေါ်အကောင်းဆုံးကြည့်အဘယ်သို့သောခဲ့သည်. သူမစျေးဝယ်သွားသည့်အခါသူမလှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဖြည့်ညှင်းများအတွက်တစ်လျှောက်အနည်းငယ်ဓါတ်ပုံကြာ. သင်တို့သည်တလုံးတခြေလှမ်းနောက်ထပ်သူမ၏စိတ်ကူးကိုယူသင့်အကြိုက်ဆုံးရူပခွဲခြားနိုင်. သင်အကြိုက်ဆုံးတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းဝတ်စုံဖြစ်သည့်မှတ်ချက်, သင်တစ်ဦးသန်းနှစ်ကောင်, တူခံစားအတူတကွပထမဦးဆုံးနေ့စွဲစတိုင်များအိပ်မက်စုဆောင်းမှုကိုတင်ကိုစားဆင်ယင်ဆင်း jot.
ဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖက်ရှင်အကြောင်းနာ​​းလည်တဲ့၏ယုံကြည်စိတ်ချမဟုတ်ပါဘူးကိစ္စများတွင်အချို့သောစတိုင့်လမ်းညွှန်များဖြစ်ကြသည်. လည်း, သင် www.thelastsinglegirlintheworld.com မှာပိုပြီး haute အကြံပေးချက်များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်.
Wear ဖို့အဘယ်မှာရှိနှင့်အတူကမ္ဘာ့ဖက်ရှင်မြို့တော်များတွင်လိုလားသောတူစျေးဝယ် 2005 ကွဲပြားခြားနားသောမြို့ရွာတို့အဘို့့လမ်းညွှန်များ: Las Vegas မှ, New York City,, ပဲရစ်မြို့, အီတလီနိုင်ငံ (Florence, ရောမမြို့, မီလန်), San Francisco က, Los Angeles မြို့နှင့်လန်ဒန်
တယ်လီဗီးရှင်းအိမ်စာ: Wear မအဘယ်အရာကိုအနည်းငယ်ခုမြောက် watch. ဒါဟာကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့င်နှင့်သင်ကိုငါမဝတ်မယ်လို့ '' ဟုကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှစ်သိမ့်နိုင်!’ ဗြိတိသျှတို့သို့မဟုတ်အမေရိကန်ဗားရှင်းဖြစ်စေသင့်ရဲ့ဗီဒိုကိုတိုက်ခိုက်ဖို့နှင့်သင်၏စတိုင်ပြန်လည်စဉ်းစားရန်ရဲစွမ်းသတ္တိကိုငါပေးမည်.
7 အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သင်ပစ်ခတ်ရနိုင် Freaky အကြောင်းရင်း